365myanmar Basics ::: 365myanmar.com
ပင်မစာမျက်နှာ 365myanmar Basics
EY တော်ဝင် jelly
Newzeland နိုင်ငံ ထုတ် သဘာ ဝ မှ ထုတ် လုပ် ထား တဲ. တကယ်. ကို ထူး ခြား ကောင်း မွန် တဲ. Health Supplement တစ်ခု ဖြစ်သော
Royal jelly ဟု ခေါ်သော EY တော်ဝင် jelly တွင် protein, amino acid, folic acid, fatty acid နှင် vitamin B တို. ပါ ဝင် ပါတယ်။Complete range of vitamins, minerals - တစ်နေ့တာအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းမွန် ကျန်းမာစေသည်။
အသန့်စင်ဆုံးသဘာဝကုန်ကြမ်းများမှ ထုတ်လုပ်ထားသောအကျိုးပြု ဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။
👑EY Taw Win Jelly👑 ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့
👑 သွေးတိုးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
👑 သွေးလည်ပတ်မှုကို မှန်ကန်စေခြင်း
👑 အိမ်ထောင်ရေးသုခကို ပြည့်စုံစေခြင်း
👑 သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းပေးခြင်း
👑 ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း
👑 အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို လျှော့ချပေးခြင်း
👑ဝက်ခြံနှင့်အဖုအပိန့်များ သက်သာစေခြင်း စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
� မနက်(၂)လုံး အစားမစားမှီ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
� ကျား၊မ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုးဘာသာ မရွေး မှီဝဲနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး သာယာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် 👑 EY တော်ဝင်ဂျယ်လီ (Royal Jelly) 👑
ပင်ပန်း မှူ နှင့် မောပန် ခြင်း များ မူလထက် နှစ်ဆ ခံနိုင် ရည်ရှိ ပြီး အိုမင်း ရင့်ရော် မှုကို နှေးကွေး စေပြီး ကာမ စွမ်းအင် တိုးခြင်း၊ ကိုယ်ခံ စွမ်းအား စနစ် ကို ကောင်း မွန်စေ ခြင်း နှင့်Royal Jelly ၏ အခြား သော ကျန်းမာ ရေး အကျိူး ကျေးဇူး များ ကို ခံစား ရ မည် ဖြစ် ပါသည်။
အိုမင်း ရင့်ရော် ခြင်း ကို နှေးကွေး စေပြီး မောပန်း ခြင်း ကိုခံနိုင်ခြင်း၊ ကာမ စွမ်းအင် တိုးခြင်း၊ အသား အရေနှင့် ကလေးမွေးဖွား နိုင် မှူကို အထောက် အပံ့ ပေး ပြီး Royal Jelly ၏ အခြား သော ကျန်းမာ ရေး အကျိူး ကျေးဇူး များ ကို ခံစား ရ မည် ဖြစ် ပါသည်။
သက်ကြီး ရွယ်အို များ
သက်ကြီး ရွယ်အို များ တွင် အဖြစ် များ သော ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ အကြာ နှင့် ပတ်သတ် သော ဝေဒနာ များ ကို သက်သာ စေ သည့် အပြင် စိတ် ကို ရွှင်လန်း ပေါ့ပါး စေ ခြင်း ၊အိုမင်း ရင့်ရော် မှုကို နှေးကွေး စေပြီးRoyal Jelly ၏ အခြား သော ကျန်းမာ ရေး အကျိူး ကျေးဇူး များ ကို ခံစား ရ မည် ဖြစ် ပါသည်။
၁၀ နှစ် နှင့် အထက် ကလေး များ
ကလေး ကြီး ထွား ဖွင့်ဖြိုး မှူ စွမ်း အင်နှင့် စိတ် ရွှင်လန်းကျန်းမာ ပြီး အစား စား ချင်စိတ် ကို တိုးတက် စေခြင်း၊ နှင့် Royal Jelly ၏ အခြား သော ကျန်းမာ ရေး အကျိူး ကျေးဇူး များ ကို ခံစား ရ မည် ဖြစ် ပါသည်။
Home Delivery service ဖြင့် အိမ်တိုင် ရာရောက် အခ မဲ့ ပို့ ဆောင် ပေး နေ ပါ ပြီ။
ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက Body Language Group ရဲ့ 📱 Hotline : 09-778 79 79 79 ကို ဖုန်းဆက်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ Chatbox မှာ နာမည်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ချန်ထားခဲ့ရင်လည်း ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါတယ်နော်
Food supplements ဖြစ် သောကြောင့် 👉side affects 👈လုံးဝ (လုံးဝ ) မဖြစ် ပါ ။❌❌
Myanmar FDA approval ရထားသော ကြောင့် စိတ်ချယုံ ကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ 👍
Member ဝင်ပြီး reseller လုပ်ချင်တဲ့ ကွီးတို့ ခေးတို့ အတွက် အထူး လျော့ဈေးရှိတယ်နော် ☺️
NewZeland မှ ထုတ်လုပ်ပြီး Rock Enterprise Co.,Ltd. မှ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စလှယ် အဖြစ်ဖြင့် တင်သွင်းဖြန့်ချီပါသည်။
✉️Viber - 09-778-797979
facebook : https://www.facebook.com/blg2016
EY Royal Jelly(တော်ဝင်)
EY Royal Jelly
ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက Body Language Group ရဲ့ 📱 Hotline : 09-778 79 79 79 ကို ဖုန်းဆက်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အောင်တော်ဝင် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ရှားစောင်းလက
အောင်တော်ဝင် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ရှားစောင်းလက်ပတ်ဓါတ်စာ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ရှားစောင်းလက်ပတ်၊ ထန်းလျက်၊ မန်ကျည်းသီး၊ ပျားရည်၊ စမုံမျိုး(၅)ပါး၊ ဆားမီးဖုတ်
အောင်တော်ဝင် အဆီကျ ဂျင်း/ ပျားသံပုရာအနှစ်
သွေးတိုးရှိသူများ၊ ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ရှိသူများ မည်သူမဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာ မှီဝဲစားသုံးနိုင်ခြင်း
သွေးတိုးခြင်း၊ အသဲအဆီဖုံးခြင်း၊ နှလုံးအဆီဖုံးခြင်း
သွေးတွင်း အဆီဓာတ်များသူများ၊ အဝလွန်သူများ၊ အဆီကျဗိုက်ချပ်လိုသူများလည်း နေ့စဉ် ပုံမှန်စားသုံးသင့်သော ဓာတ်စာဖြစ်ပါတယ်
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ နှလုံးအားနည်းခြင်း၊ သွေးတိုး လေဖြတ်ထားသူများ၊ အစာအိမ်ရောဂါနှင့် လေပွတတ်သူများ၊ လေအောင့်ခြင်းတို့ကို အထူးသက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း
နှလုံးသွေး လည်ပတ်မှုကို အထူးကောင်းမွန်စေခြင်း
သွေးတွင်း ကိုလက်စထောကို ကျစေခြင်း
သဘာဝပျားရည်ဖြင့် စိမ်ထားခြင်းကြောင့် နှစ်ရှည် အထားခံနိုင်ခြင်း
သဘာဝနနွင်းစစ်စစ် ၉၀%၊ ပျားရည် ၁၀%
ပုံမှန်ဆဲလ်များ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကြောင့် ကင်ဆာဆဲလ်များ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို (၂၄) နာရီအတွင်း တိုက်ဖျက်နိုင်သော စွမ်းအားရှိခြင်း
သွေးအတွင်း အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုတို့ကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ခြင်း
Sacha Inchi Seed (ကြယ်ပဲ)
ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်၍ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
ဝမ်းကိုမှန်စေပြီး မျက်စိကြည်လင်၍ ဆံပင်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိပေး၍ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆီပိုများကို လျှော့ချပေးခြင်း
အာရုံကြောအားကောင်း၍ မှတ်ဥာဏ်ကို ကောင်းစေပြီး အမေ့လွန်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်းနှင့် သွေးတိုး၊ ဆီချို၊ နှလုံးရောဂါတို့ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
YSH First Healthy Ginger ဂျင်းပေါင်း (350g)
YSH First Healthy Ginger ဂျင်းပေါင်း
ရွှေကျွန်း လိမ်းဆေး သဘာဝကမ်းဇော်ဆီစစ်စစ် (8ml)
လက်ကိုလည်း ညစ်ပေမှု မရှိစေခြင်း
REMAX Rabbit Vacuum Cup (RT-CUP24)
REMAX Bunny Glass Bottle (RT-cup26)
Features：Mini / Portable / Exquisite
Materials：PP + Silicone+ High Borosilicate Glass
REMAX Staimless Steel Birdcage Thermos (RT-CUP19
Material: ABS + PC + Silica Gel + Stainless Steel
Working Temperature: -10 Celsius ~ 100 Celcius
Can be used asafood steamer;
Able to steam porridge, able to steam instant noodles, able to steanm quail eqq
High Road Organizers Car Back Bag
ကားနောက်မှာ ပစ္စည်းလေးတွေ တင်ဖို.
High Road Organizers လေးကို Rocket မှာ ဝယ်လို. ရပါပြီ။
အမဲ တစ်ရောင်တည်း ရှိပါမယ်။
ကားခုံနောက်မှာ ချိတ်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း - 8000 kyats
နှစ်ခုဝယ် - 15000 kyats
Car Dual Camera Black Box
TAS မှ TS300 Car Black Box Promotion ကာလကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်၍ အခမဲ့ပို့ ဆောင်မှုအစီစဉ်ပါပြုလုပ်လိုက်ပါသည်
TS600 Car Black Box သည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့်မှတ်တမ်းရယူခြင်းများ လွယ်ကူသည့်ဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အဆင့်မြင့် လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံစနစ်ပါဝင်ပါသည် IPS Display ဖြင့် မတော်တဆမှုမြင်ကွင်းများလှုပ်ရှားမြှုမန်ဆန်သောမြင်ကွင်းများကိုချက်ချင်းပြန်လည်ကြည်ရှုးနိုင်ပြိအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပျက်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်
100W Pixel HD4ဖန်မှန်ဘီလူးပါဝင်ပြီးအမြင်အာရုံထောင့် 170 ဒီဂရီရရှိပါသည်
SD card 32GB ထိထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
Back Camera ပါဝင်ခြင်းကြောင်းကားနောက်ဆုတ်/Parking ပြုလုပ်ခြင်းများကိုအလွယ်တတူဖြစ်စေပြီး Record လဲလုပ်ပေးထားခြင်းကြောင်းအနောက်မှခဲနှင့်ပေါက်ခြင်း အနောက်မှာလာရောက်တိုက်ခြင်းများကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါသည်
Item name good quality car camera
Video resolution 1920*1080P/30fps
Storage capacity maximum support 32GB
Lens dual cameras
USB port USB2.0 5pin
Power interface USB2.0 DC5V
Operating current 590mA
Packing size 20*11.2*7.3cm
Functions G-Sensor,Motion-detection,Monitoring parking,Night vision
Promotion Price : 65000ks
Promotion 10/10/2017 to 10/11/2017 ထိသာ
အုာမခံ ၆ လပေးထားပါသည်
TAS Myanmar ၏ GPS Tracker နှင့် Black Box များကို ဝယ်ယူအသုံးပြု လိုပါက အောက်ဖေါ်ပြပါ ဖုန်းများသို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပြီ။ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လေ့လာလိုပါက အောက်ပါ အရောင်းဆိုင်တွင်လဲ လာရောက် ကြည့်ရှုမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
နယ်များသို့ကားဂိတ်မှ တဆင့် ပိုဆောင်ပေးပါတယ်။ လက်ကားဝယ်ယူလိုသူများ အတွက် အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးပါသည်
Car Rareview Display Monitor(4.3 tv)
VTech Push and Play Spinning Top (BBVTF186303)
AA ဘက်ထရီ သုံးလုံးထည့်၍သုံးရခြင်း
VTech Learning Walker (BBVTF77000)
(၆)လ မှ (၃၀)လ အရွယ်အတွက် သင့်တော်ခြင်း
piano bar ပါရှိသော learning center ကိုဖြုတ်၍လည်း သုံးနိုင်ခြင်း
VTech Learning Walker (BBVTF77050)
VTech Animal Friends Nursery Rhymes Book (BBVTF27503)
(၉)လ မှ (၃)နှစ် အရွယ်အတွက် သင့်တော်ခြင်း
ကလေးများမှ ရွေ့ပြောင်းပေးနိုင်သည့် အရုပ်ပုံခလုတ်ငယ်များ ပါရှိခြင်း
AAA ဘက်ထရီ နှစ်လုံးထည့်၍သုံးရခြင်း
Ingenuity ConvertMe Swing-2-Seat Sahara Burst (BBBS60100)
- Auto လွှဲပေးသည့် swing နှင့် vibrating seat
- U.S နိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့် premium brand ဖြစ်ခြင်း
- soothing vibration ပါရှိခြင်း
- 8 melodies နှင့်3nature sound ပါဝင်ခြင်း
- ခါးပတ်ပါရှိသဖြင့် ကလေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း
Baby Bright Ingenuity Baby Base2in 1
အသက် (၄)လ မှ (၄)နှစ်အတွက် သင့်တော်သော ကလေးထမင်းစားထိုင်ခုံ
ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်(၅၀)အထိ ခံနိုင်ခြင်း
ကလေးငယ်အတွက် အထူးသက်တောင့်သက်သာရှိစေသော ထိုင်ခုံကူရှင်ပါရှိခြင်း
ခါးပတ်ပါရှိသဖြင့် ကလေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း